लाइसेन्सको अनलाइन फारममा बिचौलियाको बिगबिगी :: सुधिर भण्डारी :: Setopati
लाइसेन्सको अनलाइन फारममा बिचौलियाको बिगबिगी
सुधिर भण्डारी ललितपुर, पुस ९
‘दाइ, कति कामले आउनुभयो?
‘अनलाइन फर्म भर्ने हो? भर्ने भए यता आउनुहोस् है’, ललितपुर, एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय अगाडि केहीबेर उभियो भने सुन्न नचाहे पनि यस्ता आवाज सुनिन्छन्।
यो सँगै फाराम भर्नेको भीड उत्तिकै देखिन्छ। यो भीड अनलाइन फारम भर्न नजान्नेको होइन, फारम भर्नै नसकेपछिको बाध्यता हो।
फारम भर्ने निःशुल्क पनि कहाँ हो र। बिचौलियालाई २ सय रूपैयाँ बुझाउनुपर्छ। नागरिकताको फोटोकपी र ब्लडग्रुप दिएपछि उनीहरुले आवेदन खुल्ने बित्तिकै भरिदिँदा रहेछन्।
कार्यालय अगाडि बस्ने साना–तिना ब्यापारी मात्र होइन। ठूला–ठूला ड्राइभिङ स्कुलले पनि फारम भरेको २ सय रुपैयाँ लिने गर्छन्।
दसैं तिहारको लागि लामो समयसम्म बन्द रहेको आवेदन मंसिर ७ गते खुल्यो। तर, आवेदन खुलेको केहीबेरमा सभर्र चलेन। धेरैले एकैपटक फारम भर्दा सर्भरनै डाउन भएको यातायात व्यवस्था विभागले बतायो।
विभागले यो समस्या हल गर्न कोटा सिस्टम लागू गर्नुपर्‍यो। कोटा अनुसार दैनिक ७ हजार २ सयले मात्र फारम भर्न पाउनेछन्।
विभागले कोटा निर्धारण गरेपछि ड्राइभिङ स्कुल तथा अन्य बिचौलियालेनै कोटा सकिदिन्छन्।
कोटा सिस्टमले सभर्रनै क्र्यास हुने समस्या टरे पनि आवेदन फारममा बिचौलियाकै हालिमुहाली छ।
धेरैबेर इन्टरनेटको पहुँच तथा जानकार सेवाग्राहीले त फारम भर्न पाएका छन्। तर, अरूलाई भने अनलाइन फारम ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर्’, जस्तै भएको छ।
उता, विभागले भने बिचौलियालाई हटाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।
‘पहिले बिचौलियाले एकैपटक ५०/६० वटा फारम भर्न मिल्ने सफ्टवयर बनाएका रहेछन्, जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई कोटा बाँकी रहन गाह्रो पर्थ्यो। तर, अहिले हामीले एक पटकमा एउटा मात्र भर्न मिल्ने बनाएका छौं’, यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले सेतोपाटीसँग भने।
बिचौलिया सक्रिय हुनुमा उपाध्याय सेवाग्राहीको पनि गल्ती भएको बताउँछन्।
‘अहिलेको युवा पुस्ता आइटीमा धेरै अगाडि बढेका छन्, तर पनि उनीहरु बिचौलियाको पछि लाग्नु दुःखको कुरा हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘आवेदन फारम बिचौलियाको लागि खोलिएको होइन, उनीहरूलाई फारम भर्नबाट रोक्न पनि सकिँदैन। तर, पैसा बुझाएपछि पनि उनीहरूले भर्न सक्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी, कोटा त सबैको लागि एउटै हो।’
अहिले केही समस्या देखिए पनि क्रमिक रूपमा समाधान हुँदै जाने उपाध्यायको विश्वास छ।
‘आवेदन फारम धेरै समय बन्द भएर यो समस्या देखिएको हो, दैनिक ७ हजार २ सयको दरले आवेदन फारम भरिँदैछ, यो समस्या छिट्टै टर्छ’, उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘पहिले एक/ डेढ महिनाको अन्तरालमा मात्र फारम खुल्थ्यो तर अहिले ३ सय ६५ दिनै भर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं।’
सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रकृया सहजीकरण गर्न भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले २०७३ पुसबाट अनलाइनमार्फत् आवेदन संकलन गर्न थालेको हो।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले लाइसेन्स नविकरण, सवारी दर्तालगायतका कार्यमा अनलाइन प्रणाली लागू गरेका थिए।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस ९, २०७५, ०३:४९:००